Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muSouth Africa, Amai Lindiwe Sisulu
Gurukota reSouth Africa rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, Amai Lindiwe Sisulu, pamwe negurukota rinoona nezvemapurisa munyika iyi, Va Bheki Cele nhasi vaita musangano nevamiririri vedzimwe nyika vakavimbisa kuti hurumende ichachengetedza zvizvarwa zvekunze zviri munyika iyi.
Asi sachigaro wesangano rinomiririra zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, reGlobal Zimbabwe Forum, VaSolomon ‘Sox’ Chikowero, vaudza Studio 7 kuti hurumende yeSouth Africa inofanira kutanga nekudzora vakuru-vakuru vemunyika iyi, zvikuru vezvematongerwo enyika, avo vavari kupomera mhosva yekutaura mashoko anokonzera kurwiswa nekuurayiwa kwezvizvarwa zvekune dzimwe nyika.
Mazuva mashoma adarika, mutungamiri wenyika iyi, VaCyril Ramaphosa, vakapomerwawo mhosva yekutaura mashoko anokonzeresa kurwiswa kwezvizvarwa zvekunze kweSouth Africa.
South Africa iri kutarisirwa kuita sarudzo dzayo musi wa08 Chivabvu gore rino, izvo zvinonzi nevamwe ndizvo zviri kuita kuti vezvematongerwo enyika vari kutsvaga rutsigiro vashandise mashoko asina kunaka.
Hurukuro naVaSox Chikowero